काठमाडौँ, २६ कात्तिक । चीनको मुन भच्र्यु कल्चर मिडिया कम्पनीले गौतमबुद्धको तेलचित्र (ओइल पेन्टिङ) बनाई सोही कथामा आधारित वृत्तचित्र र चलचित्र निर्माण गर्ने भएको छ ।
चीनका चित्रकार वाङ मिङले लुम्बिनीमा उक्त चित्र बनाउने बताउनुभयो । वृत्तचित्र आगामी मार्च महिनाबाट छायाङ्कन शुरु हुने उनले बताए । निर्माण भइसकेपछि नेपाल, चीनलगायत अन्य देशमा हुने चलचित्र महोत्सवमा प्रदर्शन गरिने उनको भनाइ छ । वृतचित्रको प्रदर्शनपछि सोही तेलचित्र चोरिएको विषयलाई लिएर ठूलो पर्दाको चलचित्र बनाउने कम्पनीको योजना छ । उक्त चलचित्रमा नेपालका तर्फबाट अभिनेता रेश मरहठ्ठालाई मुख्य भूमिकामा अनुबन्ध गरिएको हुले जानकारी दिए।
काठमाडौँ, २६ कात्तिक । बलिउडका चर्चित अभिनेता हुन् शाहरुख खान । उनले अभिनय गरेका फिल्महरु एकपछि अर्को गर्दै फ्लप भएपछि निर्देशक तथा निर्माताहरु उनीसँग फिल्म गर्न डराएका छन् । बलिउडमा उनको स्टारडम विस्तारै संकटमा परेको फिल्म समिक्षकहरुले बताउँछन् । उनले पछिल्लो समय अभिनय गरेको फिल्म जिरो फ्लप भएको थियो । यस फिल्मपछि उनीसँग काम गर्न निर्माताहरु झन् डराएको बताइन्छ । त्यस्तै दक्षिण भारतीय फिल्मका निर्माता तथा निर्देशकहरुसँग उनले कुराकानी गरिरहेको कुरा आएपनि उनले हालसम्म पनि फिल्म पाउन सकेका छैनन् । कुनै समय बलिउडका बादशाह मानिएका खान अब भने फिल्मको लागि यताउता भौतारिन थालिएको बताइएको छ । उता अक्षय कुमार र सलमान खानले बक्स अफिसमा तहल्का मच्चाइरहेका छन् । के शाहरुख खानको बलिउड करियर धरापमा नै परेको हो त भन्ने चर्चा पनि चल्न थालिसकेको छ ।
सुशान्तको परिवारलाई भेटे नाना पाटेकरले
बलिउडका ‘हिरो नं. १’ गोविन्दा!
बलिउड डान्सर नोरा फतेहीको टिकटक भिडियोलाई २४ घण्टामा ४० मिलियन भ्यूज
आमिर खानको फिल्म ‘बिक्रम बेदा’को रिमेकको काम अगाडि बढेन
लियोनार्दो डिक्याप्रियोले यसरी मनाए प्रेमिकाको जन्मोत्सव